ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန - ပြည်သူ့သတင်းဌာန မွန်အမျိုးသား သတင်းဌာန - ရှိသင့်ရှိထိုက်သော မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်များ ကြွယ်ဝနိုင်ပါစေ
Home / ဆောင်းပါး / ရှိသင့်ရှိထိုက်သော မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်များ ကြွယ်ဝနိုင်ပါစေ
ရှိသင့်ရှိထိုက်သော မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်များ ကြွယ်ဝနိုင်ပါစေ	Friday, 20 September 2013 04:23 Written by သာထွန်းမွန်	Be the first to comment! font size decrease font size increase font size Published in ဆောင်းပါး Read 720 times Print Email Rate this item
12345 (0 votes)	စက်တင်ဘာ၂၈ ကစပြီး ၃ ရက်တိုင် မွန်ပြည်နယ် မြို့တော်ခန်းမ၌ လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် မော်လမြိုင်မြို့ ပေါ်၌ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက် ပထမအကြိမ် မွန်တိုင်းရင်းသားများ မျက်နှာစုံညီလာခံ တ ရပ်အား အဆင်ပြေချောမွေ့ကျင်းပနိုင်ရန် ရှေ့ပြေးအကြို နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ တစ်ခု (သို့တည်းမဟုတ်) ပြည် တွင်းပြည်ပက မွန်အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့၏ အနာဂတ် မြန်မာ့နိုင်ငံအရေးနဲ့အတူ မြန်မာပြည် တွင်းက မွန်ပြည်သူတို့၏ အနာဂတ်အတွက် အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြမည်ဟု ရင်၌အတိုင်းအဆမရှိ ၀မ်းသာ ကြည်နူး စွာ ကြားသိခဲ့ရပါသည်။ အပြင်ဘက်မှာတော့ ရွက်ဝါကြွေရာသီမို့ သစ်ရွက်ဝါလေးတွေသည် မိခင်ပင်စည်၏ အကိုင်းထက်ပေါ်မှ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လေအဝှေ့မှာ မြေပြင်ပေါ် အချိန်တန်၍ ခနေကြရပါပြီ။ ဒါဟာ အချိန်တန်၍ မြေ ပြင်ပေါ် ကြွေကျရတဲ့ သက်ရွက်ဝါလေးတွေရဲ့ဘ၀ပါ။ ထိုနည်းတူစွာ ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိသက် သတ္တ၀ါ အားလုံးသည်လည်း ရွက်ဝါလေးတွေနည်းတူ အချိန်တန်ရင်တော့ဖြင့် မိမိတို့ခင်တွယ်ရာ မိဘအသိုင်း အ၀ိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ မလွဲမရှောင်သာ ခွဲကွာကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်……။
စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ အချိန်တိုင်းနဲ့အတူ ဘယ်သော်အခါမှမပြောင်းလဲ နိုင်မဲ့ ”ရှင်သန်နေမြဲ “ အရာတခု က တော့ ဤကမ္ဘာပေါ်က လူမျိုးလူမျိုးတိုင်းတို့၏ သမိုင်းပါပဲ။ လူမျိုးကြီးတို့၏ မွေးရာပါ ဗီဇ မဟာစိတ် တွေနဲ့အတူ လူသူအင်အား၊ လက်နက်အင်အား၊ ဥာဏ်ပညာအင်အား တွေဖြင့် မိမိတို့ထက် အရာရာမှာ အားနည်းနေသော လူနည်းစုတို့၏ မွေးရာပါ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ယုံကြည်ကိုး ကွယ်ရာ ဘာသာတရားတို့အား သွေးနှောစေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းဖက်တဲ့ နည်းဖြင့်များ ဖြင့်ထိုလူနည်းစုတို့မျိုးနွယ်ကို ဤကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်သွားစေသော်လည်း ထိုလူမျိုးစုတို့၏ ပကတိသ မိုင်း ကတော့ စီးဆင်းနေဆဲဧရာဝတီမြစ်ကြီးလို “ရှင်သန်နေဆဲပါပဲ” ။ ဥပမာ ”ပျုလူမျိုးတို့၏ သမိုင်း”၊ ဒီလိုသာဓက အပြုသဘောဆောင် အခြေခံအကြောင်းရာအား နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ သို့ပြည်တွင်းပြည်ပက တက်ရောက်မည့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေး နွေးသင့်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်………။လာမည့်ဒီဇင်ဘာလ၌ မော်လမြိုင် မြို့ပေါ်တွင် ကျင်း ပခွင်ရရှိမည့် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ပထမအကြိမ် မွန်တိုင်းရင်းသားများ ညီလာခံသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းပြည်ပက မွန်အမျိုး သားအားလုံးတို့၏ အနာဂတ်အတွက် နောင်တွင် သမိုင်းတွင်မည့် အရေးကြီးသည့်ညီ လာခံဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။ ထိုကြောင့်……။
ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအတွက် သော်လည်းကောင်း ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရေး အ တွက်သော်လည်းကောင်း ၊ရုန်းကန်နေရသော လူမျိုးတိုင်း၊ လူတိုင်းလူတိုင်းသည် အနာဂတ်အတွက် စဉ်းစားကြရာ၌ အတိတ်ကိုတော့ ပြန်ပြောင်းသတိရမိ မှာ အသေအချာပါပဲ။ အတိတ်သည် အနာဂတ်၏ ရည်မှန်းရာပန်းတိုင်တခုအတွက် ”မီးပြတိုက်တခု” ဆိုရင်မမှားပါ။
မွန်လူမျိုးတို့၏ အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်လန်ကာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရရင်ဖြင့် မွန်တို့သည် မြင့်မြတ် သော မွန်ခမာအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ သို့ခေတ်အဆက်ဆက် ရွေ့ပြောင်းကြရာတွင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်ကြပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်အကြံ အဆတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူမျိုးဖြစ်သည့်အပြင် ရဲရင့်ပြီး ရိုးသားသောစိတ်ထားနှလုံးသား ပိုင်ဆိုင်သူ များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဒီ့အပြင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတွေနဲ့ ပြီးပြည့်စုံသည့် လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီး၊ တခါတရံမှာ ကိုယ်ချင်းစာ အားနာမှုအတွေနဲ့အတူ မလိုအပ်ပဲအချင်းချင်းမာန တရားတွေ ပြတတ်ကြပါ တယ်။ ဒီအချက်တွေကိုလည်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ကြမည့်ကိုယ်စားလှယ်များ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပေမည်။
အေဒီ ၅၇၃ ခုနှစ်တွင် မွန်ညီနောင်နှစ်ပါးဖြစ်ကြသော ”သမလ၊၀ိမလ” တို့ထူထောင်ခဲ့သော မွန်နေပြည် တော်ဟံသာဝတီ သည် အေဒီ ၁၇၅၇ ခုနှစ်တွင် ဦးအောင်ဇေယျဦးစီးသော ဗမာ့ပဒေသရာဇ် လက် အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ရသည့် အဓိက အကြောင်းရင်း တရပ်ကား ပဒေသရာဇ်ခေတ်က ခေတ် အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်သူ မွန်ပဒေသရာဇ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မွန်လူမျိုးတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအား နည်းခြင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် အဓိကပါဝင်ဆွေးနွေးကြမည့် ဦးဆောင်နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ မှတဆင့်လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့်မွန်တိုင်းရင်းသားညီလာခံ၌ ယခုလက်ရှိ အများစုသော မွန်ု ပြည်သူတွေ လိုလားတောင့်တနေကြတဲ့ မွန်ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ နှစ်ပါတီ အပြီးသတ် ပူးပေါင်းနိုင်ရန်နည်းလမ်းအား ရှာကြံနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီိတို့ တနိုင်လုံးအတိုင်း တာဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် (၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက် ပွဲသည် မွန်ဒီမိုကရေစီနှစ်ပါတီ အတွက်အထူးစိန်ခေါ်မှုတရပ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ပြီးခဲ့သော (၂၀၁၀) ရွေး ကောက်ပွဲတွင် တတ်သိပညာရှင်အများစုဖြင့် တည်ထောင်ထားခဲ့သည့် မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာမွန် ဒီမို က ရေစီပါတီ လွှတ်တော်အမတ်(၁၆)နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းသည် အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှုမပြုလို့သာ မျက်နှာပန်းလှခဲ့ သည်ဆိုတာ ယုံမှားစရာမရှိပါ။ ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ မွန်ဒီမိုကရေစီနှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းနိုင်ရေးအတွက် အကယ်၍သာနှစ်ဖက်စလုံးမှ ဦး ဆောင်သူများသည် စေတနာပြည့်ဝစွာဖြင့် မွန်တမျိုးသားလုံး၏ အနာဂတ်ကို ရှေ့ရှုကြမည်ဆိုရင် မပြေ လည်စရာအကြောင်းမရှိပါ။ တတိယနိုင်ငံရောက် တတ်သိပညာရှင်များတို့သည်လည်း မိမိတို့ နှင့်သက် ဆိုင်ရာတတိယနိုင်ငံအသီးသီးတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ပြသနာဖြေရှင်းနည်း၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အမြင် ကွဲပြား မှုကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပြေလည်စေတဲ့နည်း တွေကိုလည်း ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၌ ဆွေးနွေးတင်ပြ သင့် ပါသည်။ ထို့အပြင်ယနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အသင့်တော်ဆုံးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမူအကြောင်းကို လည်း တတ်သိပညာရှင်များတွေအနေဖြင့် အကျယ်တ၀င့်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ် ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားတို့ဖြင့် ပြီးပြည့် စုံနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြင့် သာလျှင် အ သင့်တော်ဆုံးဟု ထင်မိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေး မရမီ (1946) ခုနှစ်တွင် မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးက ဦးစီးပြီး ပထမအ
ကြိမ်ညီလာခံ တရပ်ကျင်းပခဲ့ဖူးရာ ယင်းညီလာခံမှ (က)သာသနာသက္ကရာဇ်( ၁၁၁၆) ခုနှစ် တပို့တွဲလ ပြည့်ကျော် (၁ )ရက်နေ့ တွင်ဟံသာဝတီနေပြည်တော်အား စတင်ထူထောင်သော နေ့အား မွန်အ မျိုး သားနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန်။ (ခ) ဖဆပလခေတ် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်အမျိုးသား တို့ အတွက်သီးခြားမဲစာရင်းမဲ ဆန္ဒနယ်မြေ သတ်မှတ်ပေးရန်။ တောင်းဆိုမှုအား ဖဆပလ မလိုက် လျော လျှင် ရွေးကောက်ပွဲ အားသပိတ်မှောက်ရန်တို့ ဖြစ်သည်။ ညီလာခံမှဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းမွန်အမျိုးသား တို့တောင်းဆိုမှုကြောင့် မွန်အမျိုးသားနေ့အား ကျင်းပ လာခဲ့သည်မှာ (၆၅)ကြိမ်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထိုကြောင့်(၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲကာ လ၌ပြည်တွင်း ပြည်ပကမွန်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတက်ရောက်တဲ့ ဤနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသည် ခက်ခဲသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ရမည်မှာမလွဲပေ။ သို့သော် စည်းလုံးညီညွတ်မှု အင်အား၊ ဥာဏ်ပညာ အင်အား၊ အတွေ့အကြုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ပြီး အခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဟုယုံကြည် နေမိပါသည်။ Last modified onFriday, 20 September 2013 04:28 Tweet More in this category:
« ဓမ္မစေတီမင်း၏ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း ၁၉၁၉
အောင်မြင်လာနေသော အစိုးရပေါ်လစီများ အမြီးကျမှ တစ်ဆို့နေခြင်း အပိုင်း (၁) »
back to top ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် Burma News International (BNI) ၏ အဖွဲ့ဝင် သတင်းဌာန ဖြစ်သည်။
လွတ်လပ်သော မွန်သတင်း အေဂျင်စီ ၊ ကချင် သတင်းဌာန ၊ ကုလားတန် သတင်းဌာန ၊ ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ၊ ကေအိုင်စီ ၊ ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန ၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ၊ နိရဉ္စရာ သတင်းဌာန ၊ သတင်းနှင့် မီဒီယာကွန်ယက် ၊ သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာန	ပုရိသတ် ပဲ့တင်သံများ
Zawgyi font Download here.	မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသ အခြေအနေ
Humidity: 88%	Wind:0km/h	7 Feb 2016
fb iconLog in with Facebook Forgot your password? Forgot your username? Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home3/phophtaw/public_html/burmese/libraries/joomla/filter/input.php on line 652